Abuur oo u qaabee astaamaha SVG bogga internetka ICONSVG | Abuurista khadka tooska ah
Internetku wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku dhowaanno tiro aan dhamaanayn oo nooc kasta oo kheyraad ah, sida astaamo kasta oo caado ah oo aad abuuri karto ama ka hel ICONSVG.
ICONSVG waa degel bilaash ah taas oo aad ka heli karto si aad u hesho astaamahaas SVG ee aad u baahan tahay oo lagu garto inay tahay muujinta ugu yar ee kilobites-ka muuqaalkaas ah ee aan u baahannahay inaan ku soo bandhigno bogga codsi xiriir ama kan gaadhigii e-commerce-ka
ICONSVG waa degel wuxuu adeegsadaa interface-ka ugu yar taasna iskuma dhafanayso qofka isticmaala. Qaybta kore waxaan ku lahaan doonnaa mashiinka raadinta astaanta, xarunta oo qaadaneysa inta badan boosaska kala duwan ee astaamaha SVG iyo midigta gudiga oo leh macluumaadka dhammaan astaamahaas aan riixeyno.
Waxay ku jirtaa guddigaas oo aan ka beddeli karno kan cabirka astaanta, dhererka, midabka, qaabeynta iyo waxa koodhku ka dhalan doono ka dib isbadalada kala duwan ee la sameeyay. Waxaan nuquleynaa lambarka SVG ama waan soo degsaneynaa oo sidii si sixir leh ayaan horeyba u lahaan doonnaa astaantaas oo ku noolaan doonta inta ugu yar boggeena haddii aan barbar dhigno magacyadeeda qaab JPG ah.
Iyo in kastoo malahan boqolaal iconsRuntu waxay tahay in dhammaan kuwa ay leedahay, loo isticmaali karo astaamahan oo sida caadiga ah soo bandhiga waxyaabo aasaasi ah sida cinwaanno, digniino, ogeysiisyo, maalin / habeen, goobo, calaamado tilmaam ... Kaalay, ma aha waxbaa inaga maqan hadaanan u muuqan astaan ​​gaar ah.
Haddii ay tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u bilaabato u isticmaalkeeda, waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho batoonka deeqda ee ku yaal dhinaca bidix ee hoose si aad ugu casuunto abuure kafee. ICONSVG waa degel ficil ahaan ah aalad khadka tooska ah isku mid ka ah kuwa kale oo badan taasoo aan beryahan ka hadlaynay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » ICONSVG, oo ah degel bilaash ah si aad u habeyn karto astaanta SVG